Ibhlog Juan Herranz
Uphononongo lwemuvi. Konke malunga neefilimu ezizezona zibalaseleyo ngabalawuli abaninzi, kunye nombono wam kunye nokugxekwa kwemidlalo yabadlali.
Top 3 Ewan McGregor bhanyabhanya
Emva kwamanani amakhulu e-cinema kukho umgca wesibini ogcwele abadlali kunye nabadlali be-actress abanomdla wokungena esenzweni ukuze bahluthe izandla zozuko lwe-cinematographic kwi-Pitt, Deep, DiCaprio kunye nenkampani. U-Ewan McGregor ngomnye wabo badlali baqinileyo, abaqinileyo. Itoliki ekwaziyo...
Iimuvi zikaRussell Crowe eziphezulu ezi-3
Kuyafaneleka ukuba uRussell Crowe aphose iintshinga ezininzi njengomthombo wemiboniso yakhe emininzi. Kwaye kufanelekile ukuba kubonakala ngathi kulahliwe ngokwasemzimbeni kwiminyaka yakutshanje (okanye ubuncinci okuthethwa ngayo ebusweni bento enokuba yiyo nayiphi na enye ingxaki okanye iimfuno zesikripthi). Kodwa hayi...
Iifilimu ezi-3 ezigqwesileyo zikaJavier Cámara
Kum kubonakala ngathi i-cinema yaseSpain inedemokhrasi ngakumbi, ilungelelaniswe ngakumbi kwinyani yezenzo ezilungileyo. Ukuyithelekisa neHollywood, ndiyathetha. Kuba eYankeeland ukuba umhle unokufunda ukwenza izinto kwimpukane, okwangoku ukhazimlisa umbukeli ukusuka kumzimba ukuya ...
Ezona bhanyabhanya zi-3 ziBalaseleyo zikaDaniel Day-Lewis
Njengoko ixesha lihamba, siya kuphoswa yingqondi yokutolika efana noDaniel Day-Lewis. Iya kuba ngumcimbi wobunzulu awayethatha indima yakhe, inqaku lelokuba mhlawumbi wayekhathazwa koku kunxitywa kunye nokukrazula ngamanye amaxesha ahlasele abo bashiya yonke into kulo naliphi na icala ...
Iifilimu ezi-3 eziphezulu zikaRobert de Niro
Masilibale malunga noRobert de Niro wokugqibela ukukhupha omnye umdlali omkhulu ukuba wayekho ngexesha elithile. Isenokuvakala ingqwabalala kodwa kunjalo, enye yezona ntlobo zibalaseleyo ze-celluloid kudala zadlula ngosizi kunozuko lweefilimu ngaphandle kwaloo ndawo ye-cinema yakudala ...
Ukusuka kumhlalaphantsi wakhe wegolide phantsi kwengoma yeLakers, uJack Nicholson usabonisa amandla amangalisayo awayesoloko enikezela kubalinganiswa bakhe. Utoliko oluvela kwi-70 esele ikude kunye neyengqondo kude kube ngenkulungwane yama-XNUMX. Ubaleko olungenakuthelekiswa nanto kwistardom yanamhlanje...
Xa kufikwa kwikhathalogu kaMat Damon sinokufumana iingxaki. Akulula ukubiza umfana onjengaye, onokudlula kumhlobo wakho wobuntwana obungasoze ucinge ukuba udlala iqhawe lemuvi kunye nentliziyo ebuhlungu yohlobo lukaBrad Pitt. Kwaye kunjalo…
Iimuvi ezi-3 eziphambili zikaJennifer Lawrence
Umdlali weqonga oqokelela iirejista zokutolika ngokungathi ubuhle bakhe buyinto ekulula ukuyenza. Ngokungathandabuzekiyo uJennifer Lawrence angayonwabela umlawuli omkhulu wexesha elidlulileyo njengoHitchcock. Ngenxa yokuba kuyo sinokufumana imvelaphi engalindelekanga ukuba i-cinema ihlala ifuna njengento eyothusayo. Into…
Iifilimu ezi-3 ezilungileyo zikaLuis Tosar
Kukho abadlali abagqibeleleyo beziphi iindidi. ULuis Tosar kunye nokukrokra ngokona kubanzi kuyenye yezona zinto zimnandi zokudibana kwi-cinematography yaseSpain. Kwaye kukuba lo mdlali waseGalicia unokubandakanya ububi kuyo nayiphi na imiboniso yakhe; okanye ngokuchaseneyo, ...
Top 3 uKeanu Reeves bhanyabhanya
Kunzima ukucinga ngoKeanu Reeves kwaye ukhawuleze umbeke kumdlali othile westereotype. Nokuba zizigqibo ezizezakhe, eqhutywa ziimfuno zomsebenzi okanye, ewe, yinguquko etolikayo, uKeanu olungileyo usoloko ezihlaziya ngesantya esinyanzelwayo. Kulaa nkwenkwe ifoto yakhe egqunyiweyo...
Iifilimu ezi-3 ezilungileyo zikaMario Casas
NgoMario Casas kwenzeka into engaqhelekanga kum. Kwelinye icala, ndicinga ukuba ungumdlali olungileyo, kodwa kwelinye icala, umlinganiswa ofanayo uhlala eboniswa kum, kungakhathaliseki ukuba yiyiphi indima endiyidlalayo. Kufuneka ibe ngumcimbi wobukho bakhe obuphawulweyo okanye ithowuni yakhe yelizwi ephantsi, njengomzamo wokusebeza ...